Isivivinyo sokuzitholela i-Covid-19 antigen kit Sichuan Yinye Medical Technology Co Ltd.
ISichuan Yinye Medical Technology Co, Ltd. itholakala eGlobal Center yaseChengdu, esifundazweni iSichuan, eChina. Kuyibhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu eligxile ku-R & D, ukukhiqizwa nokuthengiswa kokuxilongwa kwe-in vitro (IVD) emkhakheni we-biomedicine. Izibophezele ekwakheni lonke uchungechunge lwemboni yohlelo lokuxilongwa olusizwa ngobuhlakani bokufakelwa. Ulayini womkhiqizo wenkampani uhlanganisa uhla oluphelele lwemikhiqizo yokuxilonga i-in vitro efana ne-immunodiagnosis, ukuxilongwa kwamangqamuzana, nokuhlolwa kwe-microbiological. Inokuqongelelwa kwezobuchwepheshe okujulile nezinzuzo ezihlukile zezobuchwepheshe emkhakheni wokuhlolwa komdlavuza kusenesikhathi, ukutholwa okusheshayo kwezifo ezithathelwanayo, kanye nokuhlolwa okusheshayo kwezifo ezikhulayo.
Ulayini womkhiqizo wenkampani uhlanganisa uhla oluphelele lwemikhiqizo yokuxilonga i-in vitro efana ne-immunodiagnosis ...
I-COVID-19 Antigen Detection Kit Yamasampula We-Nasal Swab / Sputum （Ukuzihlola Kwakho)
I-COVID-19 Kit Yokuthola I-Antigen Yamasampula Esikhohlela
I-COVID-19 / I-Influenza A / I-Influenza B Yokuthola Ikhithi
● Ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile nokuqinisekisa ukuthi isilinganiso sokusetshenziswa kwemishini yezokwelapha sikhulu kuno-95%.
● Intengo yokuthengisa eqonde ngqo embonini, akekho umhambisi ozuza umehluko wentengo.
● Ngokuhlangenwe nakho kweminyaka engama-20 kwemikhiqizo yezokwelapha, u-Yinye usebenzele amaklayenti amazwe angaphezu kwama-30 ngokomsebenzi emhlabeni jikelele.
● Ngeminyaka eyi-10 iwaranti esezingeni ukuqinisekisa ukubambisana okuqhubekayo.
● Bangaphezu kuka-130 abasebenzi abaqeqeshiwe ukukunikeza uhla olugcwele lwezixazululo zomkhiqizo.
Yin Ye uneminyaka engaphezu kwengu-10 yesipiliyoni sobungcweti futhi uzibophezele ekuvikeleni ubhubhane.
Abasebenzi abango-130 + ukukunikeza uhla olugcwele lwezixazululo zomkhiqizo.
Iziqu Ezithuthukisiwe Zobuchwepheshe
Iziqu ezithuthukisiwe zobungcweti nama-degree wobudokotela angaphezulu kwe-30% yethimba lenkampani.
Imikhiqizo ithunyelwa emazweni angaphezu kuka-30 kanye nezifunda, kusiza umsebenzi wasendaweni olwa nobhubhane.
INew-Gene & Yinye inamakamelo amathathu ahlanzekile ebanga le-GMP ekukhiqizweni kwe-lateral flow assay okuqinisekisa izinga eliphakeme kakhulu lamazinga wokukhiqiza
Amandla Okukhiqiza Okuphezulu
Njengamanje, iNew-Gene & Yinye inabasebenzi abangaphezu kuka-500 abasebenza isikhathi esigcwele, okuletha umthamo wokukhiqiza wansuku zonke wama-pcs angama-3,000,000
Imishini Yokukhiqiza Ezenzakalelayo
INew-Gene & Yinye inezimboni ezimbili nezindlela eziyisithupha zokukhiqiza ezizenzakalelayo ngokuphelele ezinciphisa amaphutha abantu futhi zenyuse ukusebenza kahle komkhiqizo
I-COVID-19 Antigen Detection Kit ithole imvume yokuzihlola eMnyangweni Wezempilo waseBelgium (FAMHP) naseSweden Medical Products Agency (IsiSweden Medical Products Agency). I-NEWGENE yinkampani yokuqala yaseChina ukuthola imvume yokuzihlola kulawa mazwe amabili aseYurophu, kulandela iDenmar ...
Ukubhekana nesidingo esikhulu sabantu abayizigidi ezingama-800 eYurophu!
Isivivinyo se-antigen senkampani yaseChina sizuze i- "Grand Slam" yamazwe ayi-15 ahlanganisa iGermany, iFrance, i-Italy nePortugal ngesinyathelo esisodwa! Njengamanje, ngenxa yokusabalala kwamagciwane aguqukayo nezinye izinto, ubhadane lwe-COIVD-19 emazweni amaningi aseYurophu selubuyile ...
Umkhiqizo weNewGENE Novel Coronavirus Antigen uthole umbiko okhethekile we-TV kumsakazi wendawo waseSpain u-Antena3. Imikhiqizo ye-NEWGENE ithola ukuthandwa okukhulu futhi yaziwa kabanzi endaweni ngokusebenza kwayo okuphezulu futhi i-conv ...
Futhi ngokuya ngekhwalithi enhle kakhulu, intengo efanelekile, insiza ehamba phambili, sithole impendulo enhle evela kumakhasimende aphesheya kwezilwandle. Ngeminyaka eminingi insizakalo enhle nentuthuko, sineqembu lokuthengisa lokuhweba lomhlaba jikelele.
Sigxila kuyo yonke imininingwane yokucubungula ama-oda kumakhasimende aze athole imikhiqizo ephephile nezwakala ngesevisi enhle yokuhleleka kanye nezindleko zokonga.